"Ngiyaqonda, ngakho - mina khona!". Kuyinto ukudlula noma iyiphi enye isiqubulo ilungele abesifazane Pisces. Isici esivelele zalesi sibonakaliso kuzokusiza ufunde indlela yokwakha ubuhlobo nentombazane. Owesifazane ungubani Fish kungaba nzima kakhulu, Nokho, kuba ebalulekile futhi ukuvuthwa elikhulu elingokomoya. Yena aphinde abhukude abuyele ku ulwandlekazi esingapheliyo nemizwa nemizwelo. nokuvuleka Its expanses olungenamkhawulo kolwandle, futhi ngokuvamile ingaba yinselele. She - isilaleli omkhulu futhi ezimisele ukusiza umuntu abadinga usizo. Ezizwelayo amaningi ehlukahlukene, onobubele, kokuba ikhono uthande ngokungenamibandela - Nampa - owesifazane Pisces. Isici bakhuluma mayelana ekuphishekeleni romance, isidingo ukuba ngithandwa futhi ngivikelekile. Inhlanzi ebukekayo futhi njengabesifazane, okwenza kube sengozini. She - umphuphi futhi uyohlale uncamela emhlabeni wangempela fantasy. Eqinisweni, sokuhamba kusuka izenzakalo zamanje uguqulwe ube isidingo.
Yini enye ukuziqhayisa Pisces? Owesifazane isici okhombisa ukuthi ithambekele ukudlala indima intombazane abahluphekayo abangakha ulinde uyiqhawe shining zempi, okuyinto ngokuqinisekile ukulisindisa okuthile. Uphawu esivelele zalesi sibonakaliso - amabili izinhlanzi ezibhukuda zibheke. Lokhu kusho ukuthi abantu abazalwa ngaphansi kwalesi iKhima, kungaba donsa ezindaweni ezihlukahlukene zokuphila. Lona umnyombo izici eziyisisekelo Pisces. Owesifazane angaba isikhathi esiwujuqu, izwele.
Othandweni izinhlanzi namanje romantic. Lona yomuntu eyokwenziwa ibe ukudela yonke into ngenxa imizwa yabo. Kuyinto - kuyimfihlakalo ukuthi ngokuvamile kubangela umlingani udidekile. Akayena kunzima ukudweba ngokuphelele nanoma yimuphi umuntu, ngoba zonke izimfanelo ukwenza kanjalo. Utsandza izipho nokubonga, yena uzimisele ukubapha yona walabo abathandayo. Ukuze kwenzeke enhliziyweni yakhe futhi sibonise uthando kungaba, nje ukuthatha konke wakhe ukunakwa.
Yini enye engingabuye owesifazane ezahlukene Pisces? Isici kubo kufakazela ukuhambisana izimpawu ezifana Taurus, Scorpio, Umdlavuza, Capricorn futhi Pisces. Neqiniso elikhulu kunawo wonke elitholwa ezingqubuzana Aries, Gemini, Leo, Izintombi, Libra futhi Sagittarius. Fish kudingeka omningi imfudumalo nothando, induduzo ukuzazi futhi bawasekele ngokomzwelo indoda Sagittarius ayikwazi ukunikeza ngenxa abafileyo babo, yize ngempela ophanayo ngokwemvelo. Lokhu angeke abamele owesifazane Pisces. Izici amabutho azo zihlale Ukufuna uthando, isivikelo futhi isisekelo esiqinile. Ngokwenza kanjalo, uyokwazi ukusiza oFezela noma Capricorn - abalingani engcono emshadweni. Ngokwesibonelo, ukuhambisana phakathi Pisces ne-Capricorn linikeza imiphumela emihle futhi kusilethela ukwaneliseka ebuhlotsheni isikhathi eside.
Kodwa ekugcineni Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi ukuhlola izinkanyezi wesayensi oyinkimbinkimbi, futhi abantu ababili kungaba njengoba ngokuphelele akuhambisani, futhi nokwenza ozakwethu kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi uphawu zezinkanyezi. Ngokuphathelene Pisces abesifazane, nge simo esihle, ngihlale lani for a lifetime futhi abasoze akhononde. Vele kufanele belashwe kahle, ngayo yonke inhliziyo yami ukunikeza uthando - futhi uyokwenza konke okusemandleni ukuze abalingani babejabule.
Anton igama: Imvelaphi Okushiwo
Uyini umlando? Ukusungulwa yokuthi yokwamukela ifa. Yini imibhalo kudingeka ukungena libe yifa
Ukunakekela umuntu osekhulile kuneminyaka engaphezu kwengu-80 ubudala. Izici, ukunakekela umuntu osekhulile
Biography Paustovskogo Konstantina Georgievicha. Classics kwezincwadi Russian